"Andriamanitra anie hitahy ny fanalan-jaza sy ny Etazonia" | Apg29
"Andriamanitra anie hitahy ny fanalan-jaza sy ny Etazonia"
Mpamaky Mail ny Nils
Vehivavy izao ny fandaharana nanana Netflix Air izay izy mandoa hetra ho an'i fanalan-jaza, dia mamarana amin'ireto teny ireto: "Andriamanitra hitahy fanalan-jaza sy ny United States of America", ary mihira sy mandihy ho azy.
Ny teny ao amin'ny fandaharana dia izao manaraka izao:
"Fanalan-jaza, Manao veloma anareo aho!
Raha toa ka mila vehivavy hanala zaza, mandamina iray!
Raha te hanala zaza, mandamina iray!
Raha tsy bevohoka, fa manao araka ny hevitrao no tokony ho angamba, ary maniry ny ho avy handamina ny fanalan-jaza, mandamina iray!
Raha toa ianao ka bevohoka sy te ho bevohoka, aza.
Dia niakatra ho any aminareo, ary tsy voatery ho tena olana. Tena marina ny tena olana tokony ho 300 UD.som 6 Movie tapakila. Movie tapakila dia toy ny zavatra.
Ary ny vehivavy dia tsy manadino: Manana ny hanisy aina ihany, sy izay te-hanandrana hifehy azy.
Aoka tsy hanao izany.
Andriamanitra anie hitahy ny fanalan-jaza ary Andriamanitra anie hitahy Amerika! "
Izy avy eo faranana amin'ny hira sy ny dihy.
Izany no ho ahy toy ny fitenenan-dratsy an'Andriamanitra sy ny Tompo Jesoa, izay ny ankizy Sakaizan'Andriamanitra Ianao!
Ny fanalan-jaza dia tsy afaka mahazo ny vehivavy ny feon'ny fieritreretana tsy tsikaritr'izao, ary ahoana dia izao: ny vehivavy, ireo vehivavy amin'ny alalan'ny ireo mafy fo mba hiaina mifanaraka amin'ny tsara sy be fitiavana i Neny?.
Ireo asa ratsy izany fiainana firenena maro manaiky, hahatonga antsika ny fitsaran'Andriamanitra izay alehany mba hiangavy ny herisetra dia manao ny tsy manan-tsiny, tsy nanam-piarovana zaza ao am-bohoka.
I herisetra izay niteraka ny safo-drano tamin'ny farany fa maty an-drano rehetra mamorona ny fotoana!
Na ny fitaovana, ary ara-dalàna izany ankehitriny, fa tsy amin'Andriamanitra tahaka ny Mpamorona ny fiainana!
Fa ny fiovam-po ho an'ny Tompo Jesosy, ary ny fibabohana ny fahotana sy ny famelan-keloka dia afaka mitady izany ho mpanjenjena trosa.
Raha tsy izany, dia indray mandeha teo amin'ny andron'ny fitsarana ho fanamelohana sy ny fandringanana.
OT ny Baiboly dia fitahiana mba hanan-janaka, sy ny fitiavana ny maro ny antony tsy niteraka, dia fijaliana sy porofon'ny very ny fitahiana.
Times sy ny fomba amam-panao efa niova, dia maro ankehitriny mahita ny ho avy ny ankizy zavatra tsy ilaina izay tsy maintsy hamonoana.
Tamin'ny 1973, ny fanalan-jaza ara-dalàna dia tonga tany Amerika tamin'ny vehivavy iray ny zo hifehy ny tena, ny henjana niteraka fitomboan'ny fanalan-jaza.
Fa raha tsara ny ekipa ny tsy miraharaha ny fiainana, ary hanakantsakana ny olona iray teraka.
Any Soeda, ny lalàna toy izany tamin'ny 1975, ary ankehitriny dia tanterahin'ny 35000-38000 fanalan-jaza isan-taona, tokony ho 10 ny andro!
(Tokony ho 12 isan-jaton'ny mponina amin'izao fotoana izao ny lalao ho an'ny> 40 taona)
Any Amerika, 60 tapitrisa foetus maty ara-dalàna manaraka ny androany, Etazonia 325 tapitrisa ny mponina amin'izao fotoana izao. (> 20 isan-jaton'ny mponina amin'izao fotoana izao ny lalao ho an'ny> 40 taona)
Amin'ny alalan'ny aretina foetus dia nomena fahafahana mba hanamarinana ny zavatra nataony, tahaka ny teo aloha ny fiainana Andriamanitra Mpamorona mamono olona, ​​dia namono ny fiainana, toy ny hetsika am-bohoka!
Eo anoloan 'Andriamanitra isika rehetra dia indray andro ho tompon'andraikitra amin'izay ataontsika, foetus rehetra ireo ny tenany ho ny raharaha rehefa manontany ny reniny: "Neny a, nahoana no tsy velona koa Aho!"
Ireo Taratasin'i Tsy hitsara izao, fa Rouse, Varna sy hitari-dalana ny olombelona very!
Vecka 26, torsdag 27 juni 2019 kl. 08:00